PVC jilicsan & Factory Rubber - Shiinaha jilicsan PVC & saarayaasha Rubber iyo Alaab -qeybiyeyaasha
Waxyaabaha PVC ee jilicsan ayaa aad iyo aad caan ugu ah adduunka oo dhan, iyada oo aan loo eegin gudaha guriga ama albaabka bannaanka. Iyada oo leh dabeecad jilicsan oo raqiis ah, walxaha PVC ee jilicsan ayaa laga sameeyaa badeecooyin badan, kuwaas oo qaata doorar aad iyo aad muhiim u ah nolol maalmeedkeena. Kaliya fiiri hareeraha wareegyadaada, ma heli karno nolol ku habboon iyada oo aan lahayn alaabada PVC ee jilicsan, sida silsiladaha furaha ah ee jilicsan ee PVC, xirmooyinka sawirrada jilicsan ee PVC, silsiladaha jilicsan ee PVC, jiirarka jilicsan ee fiilada PVC, sumadaha boorsooyinka jilicsan ee PVC, magnets qaboojiyaha PVC ee jilicsan, jilicsan Biladaha PVC iyo IWM Aad bay u fududahay in lagu gaaro ujeeddada muuqaalka iyo shaqaynta leh shay yar oo midab leh, si loo qanciyo isticmaalka maalinlaha ah ee bini'aadamka loona xayeysiiyo ururka dhammaan noocyada kala duwan. Inta badan alaabada PVC ee jilicsan waxaa lagu samayn karaa naqshado 2D iyo 3D ah, naqshaduhu waa la habeyn karaa, iyadoo leh dhammaan noocyada kala duwan ee lagu dhejiyo astaanta. Waqtiga wax soo saarku wuu ka gaaban yahay kuwa kale, waxaan u dabacsanahay waqtiga hogaaminta iyo qiimaha. Weydiimahaaga waa in lagu maamulaa 24 saacadood oo shaqo gudaheeda kooxdayada hufan. Dalab gaar ah ayaa lagu bixin karaa tiro badan oo dalab ah.
Sawirada jilicsan ee PVC / Sawirrada Anime